Su'aal: Biyo-bax degdeg ah?
Author Topic: Su'aal: Biyo-bax degdeg ah? (Read 97579 times)
« on: July 09, 2009, 12:55:17 PM »
wlala yaal waxaa rabay in wax bixin la iga siiyo ragaga biyaha deg deg oga imaadaada maxaa keena
macudur ruuxa ku dhashay miyaa mise waa cudur ku dhaca ruuxa nalaga daa ween karo
waxaan rabaa in l aiga siiyo informeeshin buuxa oo ku saabsan mowduucaaaa
Re: Su'aal: Biyo-bax degdeg ah?
« Reply #1 on: July 11, 2009, 11:06:39 PM »
Waa maxay biyo-bax degdeg ah?
Biyo-bax degdeg ah ama waxa loo yaqaano caafimaad ahaan "Premature Ejaculation" loona soo gaabiyo "PE" waa xaalad ragga uu ku biyo-baxo muddo labo daqiiqo gudahood ah.
Ragga badankood waxay la kulmaan xaaladaan ugu yaraan hal mar noloshooda, waxay kaloo diraaso la sameeyay sheegtay isku celcelis muddada ay ragga ku biyo-baxaan inay tahay 5 ilaa 6 daqiiqadood.
Waxaa klaoo jira qeexid kale oo oranaysa hadduu ninka biyo-baxo iyadoo weli xaaskiisa dhamaysan inuu qabo "PE".
Howsha galmada waxay u baahantahay inuu jiro Rabitaan (Lipido), Kacsi (Arousal) iyo Biyo-bax (Orgasm), haddii saddexdaas mid la waayo hawlgab ayaa jiro.
Wejiga saarista biyaha (Emission) oo ah illaa ay ka soo gaarto ibta.
Wejiga gamista biyaha (Expulsion) oo ah wixii ka dambeeyo xaaladda kor ku xusan.
Biyo-baxa degdegga ah haddii qofku isku arko isagoo awal fiicnaa waxaa loo yaqaanna "Secondary PE" laakiin haddii uu qabay inta uu ka qaangaaray waxaa loo yaqaannaa "Primary PE" waxayna ku kala duwanaanayaan daaweynta.
Sidee loo daaweeyaa xaaladdaan?
2- Tababar nafsaani ah: tababarkaan waxaa lagu dheeraayaa mudada biyo-baxa iyadoo la isku dayo in la joojiyo dibne loo bilaabo galmada dhawr jeer ama tababar lagu magacaabo "Kegel Excercise" oo lagu xoojiyo murqaha miskaha si qofku awood ugu yeesho inuu kontorooli karo murqahaas.
3- Daawooyin la qaato: waxaa ka mid ah daawooyinka dheereeya mudada biyo-baxa "SSRIs" waana daawo ah lidka-diiqada iyo welwelka.
F.G: waxaa dhici karo inaad aragtid ama maqashid daawooyin iyo waxyaabo kale oo tira badan oo la xayaysiinayo oo la leeyahay waxaa lagu daaweeyaa xaladaan iyo wixii la mid ah ee adigoo la tashan takhtar aqoon u leh xaaladaada, ha isticmaalin maxaa yeelay waxay keeni karaan dhibatooyin hor leh.
Waxaa kaloo muhiim ah in xaaladdaan laga sooco kacsi la'aanta oo ah iyadane mushkilad kale oo keento hawlgabka galmada.
Waxaad hoos ka heli kartaa qoraallo iyo su'aalo kale oo la xiriira qoraalkaan:
1- Howlgabka Kacsiga
2- Waa maxay farqiga u dhaxeeyo kacsi la'aanta iyo biyo-baxa degdegga ah?
Haddii aad qabto su'aalo kale ama u baahantahay faahfaahin dheeraad ah, isla halkaan ku weydii
« Reply #2 on: July 12, 2009, 02:28:24 PM »
walala aad baad umahsantihiin sida fiican aad noogu sharax deen moduucaas
walala marka dhakhtarkee baad iigu tali laheed in aad ugato
« Reply #3 on: July 13, 2009, 10:32:28 PM »
Waxaad u tagi kartaa dhakhtar guud kadibne waxaa dhici karo in uu kugula taliyo in aad aaddo dhakhtar ku takhasusay climi-nafsiga (Psychologist).
« Reply #4 on: August 27, 2009, 08:13:37 PM »
DAHAMAMAN WALALAHA SOOMAALIYEED MEEEL WALIBA JOOGAAAAAAAAAN RAMADAAN KARIIIIIIIIIIIM
MARKALABAAD MAAAMULKA WEB WAAN IDISNSALAAMAY SIDA SAAFIGA AAD NOOGU JAWAABAYSAAAN SU,AAL IYO NOO GU SOO GUD BINAYSAAAAAAAAAAN AQOONTA CAAFIMAADKA INTAA MARKAAN KABAXO MOWDUUCAAN WAXAAN RABAAA IN AAN SU,AAL IDINKA WAYDIIYO
SU,AASHAA OO AH
NINKA QABA CUDURKAAN ALAHA KA DAAWEEY
KAWRAMA HADII UU RUUXAAS SAMEEYO AALIMIITO IYO JIMICSI MAALINTII 2SAAC HADII KU DADAALO RUUXAAS JIMISIGA IYO JIIMKA AMA AALIMIINTO SI UU UDHISO MURQIHIISAN JIRKA KUWA HOOSE ........................................ WAX IS BADAL MA IMAAN KARAA
SIDOO UU HORAY AHAAAA
DAKHTARKA AADISTIISA MA KAMAARMIKARAAA RUUXAA HADUU SAMEEYO INTAA AAN SOO SHEEGAY ...
FADLAN IGASII YA INFORMESHIN BUUXA WACKUMALSAAAAAAAAAAAAAAAAAM
PLEASE FULL IMFOMESHIN
« Reply #5 on: August 30, 2009, 09:29:58 AM »
Caafimaad dhameestiran wuxuu ka hortagaa cudur waliba laakiin jimicsi kaligii daawo uma noqdo dhibaatadaan
« Reply #6 on: November 12, 2009, 12:58:51 PM »
- Daawooyin la qaato: waxaa ka mid ah daawooyinka dheereeya mudada biyo-baxa "SSRIs" waana daawo ah lidka-diiqada iyo welwelka
?? Kilinigaa ma laga helaa soomaaliya ama kenya?/
kawran hadaan utago dhakhtar Dirta wax ku daaweeya??
Dhakhtarka Caadiga iyo MIdka wax ku daaweeya dhirta
kee rooon walala? ?/
« Reply #7 on: November 12, 2009, 06:27:30 PM »
Daawooyinka SSRIs waa laga helaa soomaaliya.
Waad u tagi kartaa takhtar dhireed oo aqoon leh.
Takhtarka caadiga iyo midka dhirta waxaa roon kii aqoon u leh waxa aad ka cabanayso.
« Reply #8 on: November 14, 2009, 12:58:01 PM »
Salaamu caleey kum
walalayaal aad baad umahadasntihiiin
barnaamijaakaan ama mawduucaan waxaan raadinayay marbadan
laakiin waan helay maanta alxadulilaaaaaaaaaah
walaal waxaan joogaa kenya
cudurkaan waaan waaan ka qabaa marka walaal dhakhaatiir wali maan u agin
kenya wee iska mushkila badan tahay walala dhina dhakhaatiirta
waxaan rabay in aan tako kinyata hosbila laakii qarash kali buu noqday
waxaa kale oo aan xayeesiin ku arki dhakhtar soomali ah oo 8 ka kuyaala
oo qaabilsan wax ku daaweeya diinta
marka walala webkan waxaan umalaanayaa kenya joogaan
xagee tagaa oo aad saacideeneysaaan walaal
« Reply #9 on: November 15, 2009, 05:02:53 PM »
su,aaal baan ka qabaaa qadobkaaann,,
waxaan rabaa in aan ogaado cuntootinka la gahelo lidka diiqada iyo welwelka lidka-diiqada .....
waxaan rabaa in la ii sheego hadii ay jirto cuntiitinka la cuno cuntooyinka la ga helo
waxaan rabaa cuntiiyinkaa magacaydooda ??
marlabaad waad ku mahadsantihiin
webka sida fiican aad wax nooga jawaabaysaaan oo aad noogu soo gudbinaysaaaan Aqoon korarsiga
Adimintonka waan idin mahad celinyaaa
IYo Dhakhaatiirta dhamaaaaaaaan iyo Xubnaha dhamaan webka
« Reply #10 on: November 17, 2009, 07:47:55 PM »
Halkaan ka akhriso waxay diiqadu ay tahay, waxa keena, calaamadaha lagu garto iyo waxa lagu daaweyaba?
Views: 15025 September 04, 2016, 07:49:05 PM
Views: 13472 March 10, 2012, 02:06:35 PM
Su'aal: Haweenayda aan marnaba usuurto galin inay heer biyo bax gaadh?
Started by Naawila HuseinBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 5659 April 10, 2016, 01:26:31 PM
Su'aal: Sidee kula dagaalami lahaa biyo baxa dagdaga ah?
Started by GuursadeBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 13904 March 04, 2011, 09:03:44 PM